The Ab Presents Nepal » ‘सरकारले रविको जत्तिको जनता जम्मा गर्न पैसा दिएर भाडामा ल्याउनु पर्छ’ पूर्व प्रधानन्यायधीस कार्की
‘सरकारले रविको जत्तिको जनता जम्मा गर्न पैसा दिएर भाडामा ल्याउनु पर्छ’ पूर्व प्रधानन्यायधीस कार्की
काठमाडौं-: पूर्व प्रधानन्यायधीस कार्कीले रवि लामिछाने राम्रै मानिस भएका कारण अन्यायमा पर्न नसक्ने बताएकी छन् । उनले न्यायलयले उनको वास्तविकता बुझेर न्याए दिने छ । रवि लामिछाने राम्रै मान्छे हुन् भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ उनले भनिन्, हामीलाई पनि त्यस्तो गलत काम गरे होलान् भन्ने हामीलाई पनि लागेको छैन । त्यस्तो अभियानमा लागेका मानिस त्यस्तो गलत काम गरे होलान् भन्ने हामीलाई पनि लागेको छैन ।उनले न्यायालयमा सबै मानिस गलत नभएको बताइन् । उनले न्यायालयप्रति मानिसको विश्वास गुम्दै गएको त्यसको कारण राजनीति भएको भन्दै गरिएको प्रश्नमा पूर्व प्रधानन्यायधीस कार्कीले सबै न्यायाधीस त्यस्तो नभएको बताइन् ।
उनले जिवनभर त्यो कुराले पोल्ने काम न्यायाधीसले नगर्ने बताइन् । नराम्रा फैसला न्यायाधीसले गरे भने अन्तराष्ट्रिय समुदायले हेरेको हुन्छ, जिवनभर उसलाई त्यही घटनाले लखेटिरहन्छ त्यसैले न्यायाधीसले पनि आफु गलत काम गरौं भन्ने हुँदैन, उनले भनिन् ।एउटा युट्युव च्यानलमा दिएको अन्तरवार्तामा उनले राजनीतिक दलका नेताले भने न्यायलयलाई पनि प्रभाव पार्न भने खोज्ने गरेको उनको भनाई छ । उनले कसैमाथि मुद्दा चल्यो भन्दैमा त्यसलाई ठूलो रुपमा लिन नहुने बताइन् ।
मुद्दा चल्यो भन्दैमा उनी दोशी हुन् भन्न नसकिने उनको तर्क छ । उनले अधिवक्ता शम्भु थापाको अन्तरवार्ता हेरीसकेपछि रवि लामिछाने निर्दोष भएर छुट्ने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको बताएकी थीइन । रविले पक्कै सफाई पाउने छन् , उनले भनिन् त्यस्तो अभियानमा लागेको मानिस एउटा मानिसको पछाडी त्यसरी लागे होलान् भन्ने मलाई विश्वास लागेको छैन । स्वतफुर्त रुपमा रविका समर्थक सडकमा आएका हुन् त्यसलाई दमन गर्न नहुने उनको भनाई छ ।
बहस किन र के का लागि ? जसरी अहिले न्यूज २४ टेलिभिजनको सिधा कुरा जनतासँग कार्यक्रमका प्रस्तोता रवि लामिछाने र पत्रकार युवराज कँडेललाई लगाइएको आ त्मह त्या दुरुत्साहनको अभियोगले के कसैले कसैलाई रिसिवी साँधेर आत्महत्या गरेमा के हुन्छ भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ । कारण हो रु दुरुत्साहनको विषयमा गरिएको परिभाषा नै कमजोर । जसलाई वकिलहरु पनि सकरात्मक देखिन्छन् ।
‘ रअ’ का हाकिमहरु भेट्न तँछाड मछाड गर्नेहरु नायक बन्न खोजे
विदेशबाट फर्किए सवा एक लाख नेपाली सरकारले जागिर दिने ।
जाडो महिनामा संक्रमित झनै बढ्ने, चार लाख पुग्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमान
टिकाको शुभ साइत विहान १०.१९ बजे। सबैले साइतको टिका लगाउ
ज्या’नको बा’जि राखेर पुस्तौंदेखि सिमारक्षा गर्दै आएका यी मधेसी (नेपाली) हरु !
सुरक्षाकर्मीले सात महिना अघि घोषित भत्ता दसैंमा पनि पाएनन्
२३ करोड उठे पछि भयो बिरोध ! फेसबुक लाइभमा आमाको रुवाबासी, (हेर्नुस् भिडियो)